Ny fasan'i Osiris, Andriamanitry ny maty sy ny fitsanganana amin'ny maty hita tany Ejipta - Afrikhepri Fondation
alakamisy 28 jolay 2021
Fifandraisana NISY NISY ANDRIAMANITRA MISY ANDRIAMANITRA
Ny fasan'i Osiris, andriamanitry ny maty ary ny fitsanganan'ny maty hita tany Egypt
Vakiteny: 3 min
CAmin'ity herinandro ity dia afaka milaza aminao izahay fa nisy zavatra hita tsy nampino hita tany Egypt. ny ekipan'ny mpikaroka italianina-Espaniola Tany Egypt dia nahita ny fasana malaza Osiris tao amin'ny nropropolis an'i Sheikh Abd el-Gourna any Thebes.
Ny fasana dia natsangana manodidina ny sarivongana emeroda an'i Osiris, izay ao amin'ny trano fiangonana vaventy. Mino ny mpikaroka fa naorina teo anelanelany ilay fasana 760 talohan'ny JC sy 525 teo aloha JCnandritra ny fitondran'ny 25e sy 26e dynasties.
Sambany vao nahita tamin'ny taona 1887 i Philippe Virey, ity fasana ity no saro-piaro indrindra. Raha ny filazan'ny ekipan'ny arkeology dia mitovy amin'ny an'i Osiris ity fasana ity.
Liana tamin'ny fasana iray izay hitan'i Philippe Virey tamin'ny taona 1887 ary nisy ny sasany nanandrana nanao sary ny drafitry ny rafitra lehibe mitondra ny lohateny hoe Kampp 327 nandritra ny taonjato faha-20, ny ekipan'ny arkeology avy amin'ny misiona Italo-Spanish Canaria-Toscana vao nahita fa fasana mitovy amin'ny an'i Osiris izy io. Io fasana io dia maneho zavatra akaikin'ny fasan'i Osiris izay hita ao Abydos, iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra tany Egypte taloha ary lasa tanànan'i Osiris andriamanitra ihany tamin'ny farany.
Hitan 'ny ekipa ny Dr. Maria Alvarez Milagros Sosa, izany fasana no misy ao amin'ny Necropolis ny Sheikh Abd El-Qurna, dia teo andrefana amoron'i Thèbes. Ireo olona nanao io fasana fahiny io dia nentanin'ny fanahin'I Osiris nalaza. Ity komplex ambanin'ny tany ity dia mifantoka manodidina ny sarin'ny andriamanitry ny fahafatesana, Osiris, ary misy lavadrano izay mampifandray trano maromaro, ny iray amin'ireo dia manana demony mitazona antsy. Araka ny voalazan'ny Dr. María Álvarez Milagros Sosa, ireo devoly ireo dia tsy misy afa-tsy ny miaro ny vatan'ny maty ao amin'ny efitra fandevenana, izay any andrefan'ny kapitalina afovoany.
Nampian'ny Departemantan'ny Antikite any amin'ny firenena izy ireo, ka afaka nandinika ireo efitrano samihafa sy ireo fifandraisana samihafa teo amin'ny efitrano misy ireo mpikaroka. Izy ireo dia afaka nahita ny maha-Andriamanitra tamin'ny hoditra maitso matevina izay ao amin'ny trano fatoriana afovoan-trano iray izay manatrika tohatra iray. Misy metaly 9 tsara lalina izay mampifandray mivantana any amin'ny efitrano hafa koa dia hita, ary koa fantsom-paharazana faharoa izay midina amin'ny metron 6 mankany amin'ny efitra roa vaovao.
Taorian'ny nanaovany drafitra momba ny fasana, dia nanondro ny Dokotera fa "fasana tsy manam-paharoa ao amin'ny nekropolis an'i Thebes izy io, satria izy io dia maneho ny toetra rehetra ananan'ny fasana mitantara an'i Osiris". Ny iraka arkeolojika manaraka izay hitranga amin'ny faramparan'ny 2015 dia hamela ny ekipa hamoaka ny efitrano.
Jereo bebe kokoa: http://www.espritsciencemetaphysiques.com/tombeau-mythique-d-osiris.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#sthash.i939u2DY.dpuf
Ahoana ny fambolena ny nifinao amin'ny alàlan'ny charcoal
Jereo ny Bokin'i Eli (2010)
Fahalalana afrikanina - Mbog Bassong
Ashwagandha, zavamaniry ho an'ny herin'ny soavaly
Manantena fahagagana - Joe Vitale (Audio)